Rajadii takoor bixida oo hargaysa ka soo ifaysa
»DARXUMADII OO LOOGU DARAY DIL BEESHA LA TAKOORO [Dirie]
walal marka hore waan ku salaamayaa marka xigana waxaan jecelahay qoraal aad ku qortay somalitalk oo aan akhriyay inan kaga jawaabo. runtii fikrad is waydaarshadu way fiican tahay gaar ahaan qof ka tirsan beeshan aad sheegtay in la hayb sooco wali sheeko namay dhexmarin sidaa aawadeed ayaan qoraalkaga ahmiyad wayn u siiyay oo aan uga soo doortay qoraalada kale.
sxb mr diriye marka hore qabiilkan aad ka hadlayso ee aad tidhi waa la hayb soocaa somaliland oo kaliya kuma noola shanta somaliyeed ba way ku noolyihiin takooriduna maaha wax somaliland ama dadka isaaqa oo kaliyi ku dhaqmaan guud ahan somalidu way ka simantahay halagu si kala bato .
sida aad sheegtay waxad tidhi somaliland waa meelaha ugu takoorida badan somalida lakin anagu isuma haysano . hadii aad hargaysa timid oo baadhitaankaagii sidaa kusoo gabagaboobay anaga ayaa xaal idin siin doona lakin hadii aad dhacdadan wali ayna dawlladu ka jawaabin aad nagu qiimaysay waxaan ku odhan lahaa sxb waad la dag dagtay.
sxb waxad sheegtay in puntland dil lagu xukumay nin dilay qof ka mid ah reeraha la yaso lakin sxb sidaas puntland may odhan ee waa xukunka rabi soo dajiyay iyaguna kaas ayuunbay fuliyeen . anaguna hadii xukunka eebe ee qisaasta aanu fulin wayno anaga ayaa ku cadaab galayna anaga oo aan u eegayn qabiilka qofku ka soo jeedo hadii la yaso iyo haduu kuwa cududa is bida yahayba.
mar labadka waxa jira sxb dhawaan sharci ay soo saareen golaha guurtida jamhuriyada somaliland oo sheegaya aabaha u diida guurka laba qof oo mid ka so jeedo beelaha la yaso in la ciqaabi doono oo sharcigasna waa la ansixinayaa. ilamaha guud ahaan meel somalia ka tirsan ayaa taas oo kale ka dhacday.
anagu hadaanu reer soamliland nahay waxanu ku dadaalaynaa inaanu noqono reerki koowaad ee jabiya darbigan aan macnaha lahayn ee dadka la yaso hortaagan qarniyada badan oo waliba naga run ah. hargaysa waxa aan ku aqaan anigu oo aan la sxb ahay nin aanu isku dhawnahay oo guursaday inan ka tirsan qabiilkina oo ilaa 5 caruur ah ay leedahay. sidi caadadu ahayd barigii hore reerkoda oo dhami way dayriyeen lakin imika dadki sidi hore maaha oo diinta ayaa dadka ku so badatay waxan arkaa ninki oo gurigisa marti aan anigu ka mid ahay ay booqanayaan oo la dareemayo inuu bulshada ku soo noqonayo. runtii waa wax lagu farxo waxa ilaacada laga sii daayaa barnaamijyo lagu dhiiri galinayo dadku inay u arkaan walaalahood oo la mid ah dadkan la takoorayo .
marki doorashadii deegaanku ka dhacaysay hargaysa waxa ka qayb galayay lix xisbi . xisbi walba waxa ku jiray murashixin ka tirsan beeshan aad sheegayso . inkasta oo tirada laga badan yahay hadana waxa u soo baxay hal murashax oo ku guulaystay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka. sidoo kale somaliland dawladeda ilaa wasiir ku xigeen intaan anigu xasuusto xilal gaadhaya way ka hayan labada gole way ku jiraan . digtoorada ay dadku ugu jecelyihin magaalada reerkan gabooyahu qaar ayay ku leeyihiin . waxa jirta koox dhan oo kubada cagta ciyaarta oo tababare loga dhigay tababarihii koobka goboloda hargaysa u qaaday 2002 oo lagu magacaabo (shubayaasha). sidoo kale labada wiil ee somaliland oo dhan laga soo xulay ee real madrid la gaynayo mid ayaa reerkina ah. anagu waxaanu idinka filaynay mahadnaq iyo inaanu somali oo dhan tusaale u noqono lakin sxb maan filayn inaad sidaa oo kale noola hadasho. ma filayo inay rerka aad ka dhalatay kula mabda yihin inta somaliland nalaguna nool.
dhacdadan dilka ah ee dhacdayna meel walba dilku wuu ka dhacaa. tusaale ahaan hargaysa xafad (daami) la yidhaa ayaad ku leedihiin dad tiro badan ayaa ku nool oo golaha deegaanka waydinkaa midh ka helay markaa sidee ayayna suurto gal u ahayn dadka inta leeg in wax shil ah (accident) ayna la kulmin. reeraha kale intaaba dil ayaa ku dhaca waxa laga yabaa in 5 nin oo walaalo ah maalin lagu wada dilo isla goob sidi ka dhacday meesha la yidhaa uubaale ee konfur ka xigta hargaysa oo ay waliba ciidamada dawladu gacantoda ku dileen ku darsoo waliba reerka laga dilay shanta inan waa reeraha hargaysa sheegta kuwa ugu xooga badan lakin tas oo kale waxay u arkayaan iska shil lakin idinku markiiba waxad soo hadal qaadaysaan yasniin .
teeda kale yasida laydin yaso ma filaysaan in aad qaybtiina ka qaadataan laftiinu.
ilaahay ayaa quraankisa ku yidhi (ina laaha laa yu qayiru qoomun xataa yuqayiruu maa bi anfusihim) oo macnaheedu yahay (ilaahayna qoom ba badalo ilaa ay iyagu is badalaan).
is badalka aad doonaysaan walal diiriye marka hore waa inuu lafihiina ka yimaadaa oo dadku idinka arkaan . tusaale ahaan caruurtiinu markay waynaato maxad markaba rayiisle ama kaboole uga dhigtaan. mar walba maxaa ugu yartihiin goobaha wax barashada . ganacsiga maxaa meel kaliya idinka baray maxaa loo arki wayay idinka oo furanaya dukaamo waawayn hudheelo iyo waliba gawaadhi cad cad wata ilayn lacag la,aani idinma haysee. teeda kale xaga diinta lafteeda waad ku yartihiin wali maan arag sheekh dadku diinta aad ugu yaqaanin oo reerkina ka soo jeeda .
walal waxaan maqaalkaygan kusoo gaba gabayn lahaa idinku is badal muujiya anaguna inaanu somalida kale tusaale u noqono waanu isku dayaynaaa. inaad waxan aad sheegayso run tahay iyo inaad nagu gaftayna taariikhda ayaa inakala saari doonta